Ugbu a ị nwere ike ikpebi ụdị mgbasa ozi Google na-egosi gị | Androidsis
Taa bụ ụbọchị Google wepụtara nnukwu ngwa ọrụ mara ọrụ niile dị n'ịntanetị na ị na-eme kwa ụbọchị na ngwaọrụ nke ị jikọtara akaụntụ gị. Gị ama, mbadamba ma ọ bụ ihe nchọgharị na akaụntụ ahụ nwere ọrụ maka ịnye data niile Google nyere ugbu a Ihe omume m, weebụsaịtị ebe ị nwekwara ike jikwaa ihe ị chọrọ ka ehichapụ ma ọ bụ debe ya.
Ọzọ nke nnukwu akwụkwọ akụkọ taa nwere njikọ chiri anya na ibe ahụ ma bụrụ ikike Google nyere gị ugbu a kpebie ụdị mgbasa ozi ị chọrọ ịhụ mgbe ị na-agagharị. Mgbasa ozi bụ akụkụ buru ibu nke ịntanetị na azụmahịa Google ma jiri ya n'ọtụtụ ebe ị gara. Adreesị mgbasa ozi a ahaziri iche site na omume nchọgharị gị, mana ugbu a Google na-agbakwunye ọkwa ọhụụ nke mgbasa ozi ọ na-egosi gị.
Can nwere ike ịnweta site na Ntọala Mgbasa Ozi Google ma ị nwere ike họrọ ụdị udi mgbasa ozi ị nwere ike ịhụ. Site na ngwa Bluetooth, akuko egwuregwu, ụlọ ọrụ ụlọ, arụ ọrụ egwuregwu, nka ma ọ bụ ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ nwere ike ịbụ narị otu narị. Ọ na-etinye oge iji chọpụta ụdị mgbasa ozi ịchọrọ ịhụ.
A haziri ntọala ahụ na ngalaba atọ: isiokwu, profaịlụ, na ọdịmma. Ngalaba edemede ndị a bụ ebe ị nwere ike ịkwụsị isiokwu ndị ahụ maka ịkpọsa otu otu. Ndi edemede a huru hoputara site na akuko nchọgharị gi ma inwere ike itinye ndi ichoro onwe gi. Na ngalaba profaịlụ bụ ebe ị nwere ike ịbanye afọ gị na okike. Akụkụ ọdịmma bụ ebe ị nwere ike ịhapụ Google ka ịgbakwunye mgbasa ozi dabere na nsonaazụ ọchụchọ na igodo.
Ozi dị mkpa na Google na-enye njikwa mgbasa ozi nye onye ọrụ dị ka ibe Mmemme m.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google enyela gị ohere ikpebi ụdị mgbasa ozi ịchọrọ ịhụ
Etu esi wụnye ihe eji egwu egwuregwu n’enweghị mgbọrọgwụ ma ọ bụ mgbake